သူရဲကောင်းတေး | ဥက္ကာကိုကို
သူရဲကောင်းတေး	Posted by oakkarkoko on December 5, 2010
V1 : ကျနော်/ငါ
ဖွင့်မရတဲ့ ဝေခွဲမှုတွေနဲ့ ကြည့်လိုက်တော့
ဆရာက ဝေဒနာဆန်ဆန် ရယ်မောလိုက်တယ်
သူ့ရယ်သံတိုင်းဟာ ကဗျာအဖြစ် လေထဲကို လွင့်ပျံ့သွားကြ
ဆရာကိုယ်တိုင်လည်း ကဗျာအဖြစ် သူ့ကဗျာတွေနောက်
မျော…. ပါ….. သွား…….။
V2 : မိုက်သွေးကောင်းတဲ့ လူမိုက်တွေစုစည်းရာ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ
၀ရုန်းသုန်းကားပြေးလွှားလာတဲ့ ကဗျာတွေကို တွေ့တယ်
ခပ်တည်တည် ဘေးစောင်းကြီးလျှောက်လာတဲ့ ကဗျာတွေကို တွေ့တယ်
ဗေဒတွေ ထည်လဲဝတ်ဆင်ထားတဲ့ ကဗျာတွေကို တွေ့တယ်
နောက်ကျွမ်းပစ်ဝင်လာတဲ့ ကဗျာတွေကို တွေ့တယ်
နေရာအနှံ့ ကဗျာတွေ ပွင့်တယ် ။
CHO : (သွေးကြောင်တဲ့သူအတွက် နေရာမရှိဘူး
သွေးကြောင်တဲ့သူအတွက် နေရာလုံးဝ မရှိဘူး)
V3 : ရှေ့တည့်တည့်မှာ ချောက်ကြီးရှိတယ်
အဲဒီမှာ ဝေဒနာမျိုးစုံနဲ့ ကဗျာဆရာတွေရှိတယ်
သူတို့ဟာ နူးညံ့တဲ့ ကဗျာဖန်တီးရှင်တွေလည်းဖြစ်တယ်
အဓိပ္ပယ်တစ်ခုတော့ သေသေချာချာ လိုအပ်ပါပြီ
ချောက်ကြီးထဲမှာ ကဗျာဆရာတွေက တောင်ပုံ ရာပုံ
သွေးကြောတစ်လျှောက်စီးဆင်းလာတဲ့ အာရုံတွေနဲ့ ငါ/ကျနော်
မျက်လုံးစုံမှိတ် ခုန်ချပစ်လိုက်တယ်………………….. !!!!!
Pre : (ကဗျာဆိုတာ အိပ်မက်မဟုတ်တဲ့အတွက် ဘယ်တော့မှ လန့်နိုးမလာခဲ့ဘူး)
← နိုဝင်ဘာဆိုတော့ နေ့တာတိုတယ် အေးငြိမ့်ငြိမ့်မွန်	ဥက္ကာကိုကို(သံတွဲ)အကြောင်းတစေ့တစောင်း (နေမုန်းရေးသည်) →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...